कथा : सन्ध्या "एक अधुरो प्रेम कहानी" - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कविता : प्रतीक्षा
कविता : चर्चा चलेको छ →
केहि बर्ष अगाडि म काठमाण्डौ देखि बुटवलको यात्रामा थिएँ । किनकी मेरो घर बुटवल मा थियो । बर्षको दुई तिन पटक घरमा जान्थेँ एक दुई महिनाको लागि । बसको यात्रामा आफ्नो सिट खोजेर बसिरहेको थिएँ । पछाडिबाट मधुरो स्वर मेरो कानलाई छुदै चारैतिर फैलियो । कोहि सानि बच्चि हासिरहेकी होली यहि सोँचेर जहाँबाट आवाज आईरहेको थियो त्यतै मुन्टो फर्काएर हेरेँ । म झस्किएँ ,अचम्मित परेँ ।बच्चिको जस्तो आवाज गरेकि त बिस् बाईस् बर्षकि जस्ति देखिने युबति पो रहिछे । कलिलो सुन्दर अनुहार देखेँ । जुन केटी केहि महिलाहरु सँग हाँस्दै कुरा गरिरहेकी थिई । म आफ्नो सिटमा त बसेको थिएँ तर उस्को त्यो हाँस्दै बोलेको दृष्यले मनमा हलचल बनाईदिएको थियो । दोश्रो मान्छेहरु बोलेको आवाज पनि कानमा गुन्जिरहेको थियो र पनि उस्को हाँस्दै बोल्दै गरेको आवाजले जितिरहन्थ्यो । मैले अरुको आवाज भन्दा उस्को आवाजलाई ध्यान दिईरहेको थिएँ । उस्को एक नजर ले मेरो मनमा तहल्का मच्चईरह्यो । थोरै समयको लागि बस रोकिएको थियो । मैले समय बिताउनको लागि झोलाबाट किताब निकालेर पढ्न लागेँ । दुई तिन पाना मात्र पढेको थिएँ होला तब मेरो कानको नजिकैबाट एक महिलाको आवाज आयो “सन्ध्या छिटो आईज , त्यहाँ कसैसँग कुरा गरेर नभुल ..” यो सुनेर उ अझै डौडदै हाँस्दै अगाडि बढ्दै गई र पछाडि पछाडि आफ्नो मुस्कान र हाँसो को गुन्जन् छोड्दै गई । केहि समय पछि उ फर्कदै थिई मैले भने उस्को बाटो हेरिरहेको थिएँ । यो भान मलाई तब भयो जब सुन्दर र साधारण तेज अनुहारमा मुस्कान् भएकि सन्ध्यालाई देखेँ र उस्ले एक झट्कामा नै मसँगबाट मेरो आफ्नोपन लुटेकि थिई ।
उ आफ्नै मस्तिमा फर्किएकि थिई । जब जब उ नजिकीदै आईरहि तब मैले किताब पढ्ने बाहाना गरेँ । बाहाना किताब तर नजर र मन सन्ध्या । अचानक उ मेरो सिट नजिकै आएर “excuse me ” भन्दै थिई मैले उस्लाई हेरिरहेँ । उस्ले फेरि बोलि ” हेल्लो म सन्ध्या , के मैले थोरै समय तपाईको किताब पढ्न सक्छु ? ” उस्को त्यो जादुवाला आवाजको अगाडि के कुरा गर्न सक्थेँ र ? मैले केहि नबोलि उस्लाई किताब दिएँ । उस्ले ” थ्यांक्यु ” भनेर आफ्नो सिट तिर गई । बस बुटवल गएर रोकियो । म पनि सबै सँगै बस बाट उत्रिएँ । बसलाई टाढा टाढा दुरिमा बढाउदै अझै अगाडि बढिरहेँ । दुई तिन पटक मैले मुन्टो मोडेर पछाडि हेरेँ । सन्ध्यालाई त्यहाँ देखेको थिएन र अगाडि बढिरहेँ । थोरै अगाडि गईसकेको थिएँ फेरि उहि आवाज आयो ” excuse me ” पछाडि फर्किएर हेरेँ । उहि सन्ध्या नै रहिछे । बिस्तारै डौडेर मेरो नजिकै आई र मेरो किताब फिर्ता गरिदिई । मेरो आँखामा आँखा जुदाएरै उस्ले “थ्यांक्यु ” भनि । तब मलाई यस्तो लाग्यो मानौ उ आँखाको माध्यम बाट मेरो मनमा उत्रिएकि थिई । उस्को आँखामा एक झलक हल्का चमक आएको जस्तो महसुस् भयो । फेरि उ केहि नबोलि गई ।
” तपाईको आँखामा चमकता छ । मलाई साँच्चि पागल बनाईदिन्छ यो तपाईको तेजस्वि आँखाले । मलाई वादा गर्नु कुनै पनि कारण यी आँखामा आँशु आउन दिनुहुन्न । भन्नु वादा गर्नुहुन्छ ? “
“हुन्छ सन्ध्या वादा रह्यो “
जब मैले उस्को कसम खाएँ उ खुशी भएर डौडेर पन्ध्र बिस् पाईला अगाडि गएर रोकिई र भनि ” जाउँ , घर जाउँ अब “
” मैले आफ्नो ठेगाना र टेलिफोन् नम्बर दिएकि छु तर अझै एउटा वादा गर्नुपर्छ । दुई महिना सम्म तपाई मलाई भेट्न आउनुहुने छैन । ठिक दुई महिना पस्चात तपाई काठमाण्डौ आएर मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ । “
“सरप्राईज होला ?” मैले नरम भएरै भने । म साँच्चि परेसान भईरहेको थिएँ । किन दुई महिना पस्चात मात्र भेट्ने भन्छे ? र मैले सोधेँ ” सन्ध्या तिमी बिरामी त छैनौ ? “
“बिहे गर्न लागेकि छ्यौ ? “
मलाई थाहा छ , तपाईले दुई महिना कसरि काट्नुभयो । तपाईले सोँच्नुभएको होला कि सन्ध्या कस्ति मन नभएकि केटी ? तर मेरो साथमा अरु बाहाना नै केहि थिएन । मैले घर परीवार लाई भनेकी थिएँ आज तपाई आउने कुरा । र मलाई भेट्न तपाई जरुर आउनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा थियो । त्यसैले तपाईलाई यहि कोठामा यो पत्र दिनु लगाएकि थिएँ । मलाई थाहा यो पनि छ कि तपाई मेरो फोटोलाई कति प्रेम भावले नियालिरहनु भएको छ । मैले जब दुई महिना पहिले नै तपाईको किताब फिर्ता गर्दै थिएँ तब बाटै मैले पत्ता लगाएकि थिएँ तपाई मलाई प्रेम भावले हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा । त्यहि समयमा नै मैले तपाईको चम्किलो आँखाको भाव बुझिसकेकी थिएँ । तर करण तपाईले मलाई माफ गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईको अगाडि म आज माफि माग्नु लायक मात्र रहेँ । तपाईलाई मैले पहिले नै बताउन चाहेको थिएँ तर सकिन । मैले अरु कतै वाचा गरीसकेकी थिएँ । र तपाईलाई मेरो कसम् एक थोपा पनि आशु नबहाउनु । र तपाईले मलाई प्रमिस पनि गर्नुभएको थियो । र तपाईका ति चम्किला आँखा लाई पानिले भिजाएर मन्द ( निभ्दै गरेको बत्तिजस्तै ) देख्न चाहदिन । के आँशु बगाएर मलाई पनि आफ्ना आँखाबाट बगाउनुहुन्छ ? प्लिज मेरो लागि हो भने तपाईको आशुहरु यो जन्ममा बेकार नै रहन्छन् ।
मेरो त्यहि त बस्ने ठाँउ छ त्यो पनि दिनुहुन्न होला त ? जब हामि मिल्यौ तपाईलाई हेर्दै थाहा पाएकी थिएँ प्रेम कसरी हुन्छ । कुनै समय नचाहिने कुनै बाहाना पनि नचाहिने बस् एक नजरमा नै हुदो रहेछ प्रेम । जब अन्तिम दिन तपाईको काँधमा टाउको राखेकि थिएँ हो त्यसै गरि जिवन भर टाउको राखेर बस्ने चाहाना मलाई पनि नआएको कहाँ हो र ? त्यो क्षण एक यादगार क्षण नै बन्छ अब । तर मैले तपाईलाई दुखी देख्न चाहदैनथेँ । त्यसैले नै यो कुरा छुपाएर राखेकि थिएँ । अनि म जतिपनी समय तपाईसँग बिताएँ , हाँस्दै रहेँ .. बोल्दै रहेँ ..!! म तपाईको साथमा नै हुनेछु तपाईकै वरिपरी एउटा याद जस्तै बनेर । हर पल साथ साथ हुनेछु त्यो मलाई थाहा छ । कहिले पनि आफुले आफुलाई एक्लो महसुस नगर्नु । जुन सुन्दर क्षण म तपाईको साथमा हिडिरहेकी थिएँ त्यो मेरो जिन्दगिको सबैभन्दा ठुलो रमणिय र अबिस्मरणीय क्षण हो । तपाईले मेरो मनलाई धेरै आनन्दीत बनाईदिनुभएको थियो । एक फेरी अर्को वादा गर्नु थियो , अर्को जन्म मा केहि पल को लागि पनि आफुबाट टाढा नराख्नु मलाई । म तपाईको जिवन संगिनी बन्ने सपना लिएर आउने छु पुरा गर्नुहोला ..!!”
मेरो पुरै अस्तित्व सुन्य भएको थियो । जुन सपना लिएर म काठमाण्डौ आएको थिएँ ति सबै च्यातिए , कतै च्यापिए , लछारिए , पछारिए , टुक्रा टुक्रा भए र पनि मैले सम्हालिरहेँ । सपनाहरु भारि बने र ति सपनाहरु बोक्नुपर्दा मेरो शरीर थकित जस्तै बन्यो । लाग्थ्यो मेरो हर एक अँग जुठो भएको छ जब मन नै जुठो बनेको थियो । मेरो घाँटिमा रोदन अड्किएको थियो । मेरो आँखाको परेलिको किनारा मा आँशुहरु छटपटिईरहेका थिए । छालहरु हानिरहेका थिए । शराप दिदै थिए मलाई आँशुहरुले । यस्तो तरिकाले आँशु अड्किएको थियो कि यदि सन्ध्यालाई अक पल पनि नभुलेर गरेको वादालाई भुल्न सक्थेँ त सायद सपनाहरु नदि बनेर बगेर जान्थ्यो । यति बर्षसम्म पनि म आफ्नो आँशुलाई परेलिमा नै थामेर दुनियादारी निभाईरहेको छु तर यो स्वास् रोकिने नाम नै लिईरहेको छैन ।